Dilalkii Ugu Foosha Xumaa Ee Ka Dhacay Soomaalida Oo La Raadinayo Ciddii Fulisay Xilli Qudha Laga Jaray Siddeed Dhakhtar - Jigjiga Online
HomeSomalidaDilalkii Ugu Foosha Xumaa Ee Ka Dhacay Soomaalida Oo La Raadinayo Ciddii Fulisay Xilli Qudha Laga Jaray Siddeed Dhakhtar
Dilalkii Ugu Foosha Xumaa Ee Ka Dhacay Soomaalida Oo La Raadinayo Ciddii Fulisay Xilli Qudha Laga Jaray Siddeed Dhakhtar
Muqdisho (JO) – Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay afduubka iyo dilka lagula kacay ilaa iyo 8 qof oo ah howlwadeenno caafimaad oo ka shaqeynayay xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Balcad.
Yaa dilay raggani, maxaase loo dilay
Lama oga wali. Meydadka dhallinyaradaasi ayaa xalay la geeyay magaalada Muqdisho, si halkaasi loogu tuso ciidamada dambi baarista, waxaase markii dambe lagu celiyay degmada Balcad halkaasi oo lagu aasay.
Dhacdadaan ayaa noqotay mid aad looga hadal hayo gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba, waxaana dadku isweydiinayaan ujeeddada loo bartilmaameedsaday shaqaale caafimaad xilli haatan uu dunida fara ba’an ku hayo cudurka Covid-19.
Ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya wakiilka uga ah xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa si xoogan u cambaareeyay dilka siddeeddaasi qof.
Waxa uu soo jeediyay in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdada lagu dilay dhalinyarada.
“Marnaba lama aqbali karo in la weeraro shaqaalaha caafimaadka taasi oo xadgudub ku ah xeerarka arrimaha banii’aadanimada.”
Dowladda iyo Shabaab
Ma cadda cidda afduubatay iyo cidda ka dambeysa dilkooda toona, balse dadka qaar ayaa arrintan ku eedeeyay ciidamada dowladda, haseyeeshee milatariga Soomaaliya ayaa eedeymahaasi ku gacan seyray, waxaana maamulka gobolkaasi uu dhacdadan ku eedeeyay ururka Al-Shabaab.
Maxay ka shaqeyn jireen raga la dilay
Toddoba ka mid ah sideedda qof ee la dilay waxa ay ahaayeen kalkaaliyayaal caafimaad oo ka hawlgeli jiray xarun caafimaad oo ay maamusho Zamzam Foundation. Magacyada ragga la dilay waxay kala yihiin:
Cabdirisaaq Cabdulaahi Xuseen
Cabdicasiis Cabdulqaadir Cabdulle.
Xarunta caafimaad ee ay ka shaqeynayeen ayaa bixineysay adeegyo caafimaad sida: Hooyada iyo dhalaanka, sida inay haweenku ku umulaan, dawo iyo nafaqana ka heli jireen dhallaanka.
Waxay sidoo kale xarrunta caafimaad adeeg bilaash ah siisaa dadka waaweyn ee bukaan socodka ah.
Jacaylka Iyo Basaasnimada!- Jarmalka Oo Shaqada Ka Caydhiyay Basaas Gabadh Jeclaaday